I-China China- CQC Service and Testing | I-MCM
Izinga kanye noMbhalo Wesitifiketi
Izinga lokuhlola: GB31241-2014: Amaseli e-lithium ion namabhethri asetshenziswa kwimishini ephathekayo ephathekayo requirements Izidingo zokuphepha
Idokhumenti yesitifiketi: I-CQC11-464112-2015: Imithetho Yesitifiketi Sokuphepha sebhethri kanye nebhethri yesibili yamadivayisi we-elektroni aphathekayo
Ingemuva nosuku lokuqalisa
1. I-GB31241-2014 yashicilelwa ngoDisemba 5th, 2014;
2. I-GB31241-2014 yasetshenziswa ngamandla ngo-Agasti 1st, 2015.;
3. Ngo-Okthoba 15, 2015, i-Certification and Accreditation Administration yakhipha isinqumo sobuchwepheshe sokuhlolwa okwengeziwe kwe-GB31241 kwe-elementi ebalulekile "yebhethri" yemishini yokulalelwayo neyevidiyo, imishini yezobuchwepheshe bolwazi kanye nemishini yezokuxhumana nge-telecom. Isinqumo sisho ukuthi amabhethri e-lithium asetshenziswe kwimikhiqizo engenhla adinga ukuhlolwa ngokungahleliwe ngokwe-GB31241-2014, noma athole isitifiketi esehlukile.
Qaphela: I-GB 31241-2014 iyizinga eliyimpoqo kuzwelonke. Yonke imikhiqizo yebhethri ye-lithium ethengiswa eChina izohambisana ne-GB31241 ejwayelekile. Leli zinga lizosetshenziswa ezinhlelweni ezintsha zesampula ekuhloleni okungahleliwe kuzwelonke, esifundazweni kanye nasendaweni.
GB31241-2014 Amaseli e-lithium ion namabhethri asetshenziswa kwimishini ephathekayo ephathekayo requirements Izidingo zokuphepha
Imibhalo yesitifiketi yenzelwe ikakhulukazi imikhiqizo ephathekayo ephathekayo ehlelelwe ukuba ibe ngaphansi kuka-18kg futhi engavame ukuthwalwa ngabasebenzisi. Izibonelo ezinkulu zimi kanje. Imikhiqizo ephathekayo ye-elekthronikhi ebhalwe ngezansi ayifaki yonke imikhiqizo, ngakho-ke imikhiqizo engekho ohlwini ayikho ngaphandle kwezinga laleli zinga.
Okokusebenza okugqokekayo: Amabhethri e-lithium-ion namaphakethe ebhethri asetshenziswa kwimishini adinga ukuhlangabezana nezidingo ezijwayelekile.
Isigaba somkhiqizo we-elekthronikhi
Izibonelo eziningiliziwe zezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo kagesi
Imikhiqizo ephathekayo yehhovisi
incwadi yokubhalela, i-pda, njll.
Imikhiqizo yezokuxhumana ephathekayo iselula, ucingo olungenazintambo, ihedisethi ye-Bluetooth, i-walkie-talkie, njll.
Imikhiqizo ephathekayo yomsindo nevidiyo isethi yethelevishini ephathekayo, isidlali esiphathekayo, ikhamera, ikhamera yevidiyo, njll.
Eminye imikhiqizo ephathekayo itilogo elisebenza ngogesi, ifreyimu yezithombe ezidijithali, amakhonsoli womdlalo, ama-e-book, njll.
● Ukuqashelwa kweziqu: I-MCM ilabhorethri yenkontileka egunyaziwe ye-CQC kanye nelebhu egunyaziwe yeCESI. Umbiko wokuhlolwa okhishiwe ungasetshenziswa ngqo esitifiketini se-CQC noma se-CESI;
● Ukwesekwa kwezobuchwepheshe: I-MCM inezinto zokuhlola ezanele ze-GB31241 futhi ifakwe ochwepheshe abangaphezu kwabangu-10 ukwenza ucwaningo olunzulu ngobuchwepheshe bokuhlola, isitifiketi, ukucwaningwa kwefektri nezinye izinqubo, ezinganikeza ngezinsizakalo zokunikeza izitifiketi ze-GB 31241 ezinembe kakhulu amaklayenti.
Langaphambilini EU- CE
Olandelayo: IBrazil- ANATEL
Isitifiketi sebhethri Cqc
Intengo Yesitifiketi Sebhethri Cqc
Inqubo Yesitifiketi seBattery Cqc
Isevisi Yesitifiketi Sebhethri Cqc
Isikhathi se-Battery Cqc sokuhola
Ibhethri Cqc Quotation
Umbiko we-Battery Cqc
Isidingo Sebhethri Cqc
Ukucaciswa Kwebhethri Cqc
Imibhalo Yezobuchwepheshe Ibhethri Cqc
Imfuneko Yezobuchwepheshe be-Battery Cqc
Ukuhlolwa kwebhethri Cqc
Izinto Zokuhlola Ibhethri Cqc
Indlela Yokuhlola Ibhethri Cqc
Umbiko Wokuhlolwa Kwebhethri Cqc
Intengo Yokuhlola Ibhethri Cqc
Isevisi Yokuhlola Ibhethri Cqc
Isikhathi sokuhlolwa kwebhethri Cqc
Ibhethri Cqc Tr
I-Cqc Testing Lab
I-Laboratory Yokuhlola i-Cqc
Iseli Likaphethiloli Cqc